Clenbuterol (CLEN) HCL ntụ ntụ (21898-19-1) hplc≥98% | AASraw
Clenbuterol hydrochloride ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Ọla abụba / Clenbuterol (CLEN) HCL ntụ ntụ
4.00 si 5 dabere na 8 ahịa Fim
SKU: 21898-19-1. Category: Ọla abụba
AASraw nọ na njikọ na ike imepụta site na gram ruo n'usoro nke Clenbuterol (clen) HCL ntụ ntụ (21898-19-1), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro njikwa njikwa mma.
Clenbuterol (CLEN) HCL ntụ ntụ ntụ
|.Rw Clenbuterol (CLEN) HCL ntụ ntụ isi agwa:
aha: Clenbuterol (CLEN) HCL ntụ ntụ
Molekụla Formula: C12H19Cl3N2O
Ọbara arọ: 313.65
agba: White Crystal ntụ ntụ
II.Raw Clenbuterol (CLEN) HCL ntụ ntụ ojiji na usoro steroid
Clenbuterol hydrochloride (CAS 21898-19-1) bụ nke akpọrọ aha na Clen, Clen HCL, site n'aka ndị ọrụ ahụ ma ọ bụ ndị na-eme ka abụba daa.
2. Ojiji Clenbuterol HCL ntụ ntụ:
Clenbuterol hydrochloride nwere ikike dị ike maka oke abụba. Ọ nwekwara nnukwu mmetụta thermogenic (na-ebili temp ahu). Clen na-abawanye ọbara mgbali ma na-eme ka obi na-arụ ọrụ. Ihe mkpali a na-eduga n’itinyekwu ahụ ọkụ. Dabere na data, ọ na - akpata glycogenolysis (nkwụsị nke glycogen), ọ bụ ya mere ọ na - enyere aka gbaa abụba anụ ahụ ọkụ.
3. Ingdọ aka na ntị na Clenbuterol HCL ntụ ntụ:
Ntụziaka 4.Fires na Clenbuterol HCL ntụ ntụ:
Na ahịa, enwere ọtụtụ Clen adịgboroja, nke bụ Salbutamol nkịtị.
Ọ bụrụ n’inwere ọka Clenbuterol ịchọrọ ị were okpomoku gị. Tupu ịmalite okirikiri Clen, buru oge okpomọkụ gị n'ụtụtụ ma mgbe ị nọ na Clen were ya ọzọ.
Y’oburu na aka nk’iru ma gi onwe gi ghahu elu aru aru. Kwesịrị ịmakwa ịma jijiji na nkụchi obi. Fọdụ n’ime unu agaghị ahụ mmetụta ndị a na usoro dị ala, wee tụọ ọgwụ ma hụ ihe na-eme. Ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime ihe ndị a emeghị ọbụlagodi ma ị nọrọ na doses nke 80-100mcg, mgbe ahụ o doro anya na ị meriri.
5. Raw Clenbuterol HCL ntụ ntụ (CAS 21898-19-1):
“Clen” a na-ejikarị adịgboroja bụ Salbutamol, nke a na-akpọkwa albutamol. Ihe kachasị dị iche na ha bụ usoro onunu ogwu. Clen dị na 40mcg na salbutamol dị na 100mg. Nwere ike ị na-esi isi ntụ ntụ ma chọpụta nke dị adị. Maka ule dị ọcha, ịnwere ike ịme nyocha HPLC.
6. Clenbuterol HCL ntụ ntụ:
Me Liquid Clen HCL ntụ ntụ na 100mcg / ml
MARA: Iji mmiri abuo a aghaghi igba oke nsogbu, esogbula ha belụsọ ma ịmara ihe ị na - eme, ma ọ bụ nwee ike ibili. Lee ederede n'okpuru.
Clen ntụ ntụ
Karama na dobe (na nha ya na droppers)
Ndị na-eme achịcha
Igwe okwu duct
Gburugburu ebe obibi Sterile
Mpempe mmiri 12 Liter buru ibu (ịwụ ga-ezuru)
Xme Clenbuterol 100mcg / ml (Ntụziaka a ga-arụ ọrụ maka T3 kwa).
Ọ bụrụ na onye ọ bụla achọpụta mgbakọ na mwepụ na-ezighi ezi, mee ka m mara, mana m chere na m ji ego na nke a.
BA bu kpachapuru anya maka i ghapu ahihia ma dobe ahihia gi aru, kwenye m na onweghi ihe ozo karie ka i gha ewere ahihia gi kwa ubochi ma choputa na ufodu ndi nje bacteria eweputarala ogha n’onu gi (emechara nke ahu). Ya mere, anyị na-aga iji 1% mee ihe maka uzommeputa a.
Ntụziaka a bụ iji gbanwee gram 1 nke ntụ ntụ (ọ bụrụ na mgbakọ na mwepụ ya ziri ezi, ọ ga -eme ọgwụ 10,000).
Mmiri a pịrị apị = 9.9 Liters (9,900 mL). Ee nke ahụ bụ lita, nke ahụ abụghị ihe osise, ọzọ nke a na-eche na mgbakọ na mwepụ ya ziri ezi.)
Nzọụkwụ 1. Yiri uwe Tyvek. Nchekwa bụ ihe kwesịrị iji Clenbuterol.
Nzọụkwụ 2. Yiri nkpuchi ndị na-ese ihe.
Nzọụkwụ 3. Tinye uwe. Themkụnye ha na uwe bụ nhọrọ.
Nzọụkwụ 4. Tụọ ntụ ntụ na nha. Wantchọrọ 100% n'aka maka ebumnuche usoro onunu ogwu.
Nzọụkwụ 5. Tinye ntụ ntụ na beaker.
Nzọụkwụ 6. Tinye BA kpaliri igbari.
Nzọụkwụ 7. Debe mmiri n’ime akpa.
Nzọụkwụ 8. Tinye ngwakọta Clen na mmiri ma jikọta nke ọma.
Nzọụkwụ 9. Tinye n'ime karama ma tinye elu.
Ngwaahịa ikpeazụ kwesiri ịbụ 10 lita nke Clen na 100mcg / ml.
Ntụziaka a bụ maka ebumnuche ntụrụndụ akụkọ ifo ma agaghị anwa ya. Ndị a bụ kemịkal dị ize ndụ. Ọ bụkwa ụkpụrụ ma emeghị ya na omume.
-IMO enwere otu uzo ị ga - esi mee nke a tupu ịme ihe a na bọket… dị mfe…
- tụọ otu 0.2g si (ee bụ nkebi nke gram, ị gụrụ nke ọma)
-pour 200mls nke everclear ka ọ bụrụ n'ime agwakọta agwakọta ụdị ụfọdụ, ma ọ bụ beaker
-eme ihe 0.2g nke gcha nzu, ma tinye obere okpomọkụ… nke a dị mfe nfe.
emechaa ya enwusila wụsa ihe azzụrụma n'ime nnukwu akpa ụdị ụfọdụ… a na m eji akwa galọn mechie elu ya.
tinye ịgbakwunye 800ml nke mmiri distilled…
-BAM!… Ị nwere 1000ml nke mmiri clen @ 200mcg / ml
- sere ya ma jupụta 50ml ma ọ bụ 100ml vials na ịmechara.
Mpekere ntụ ntụ Clenbuterol HCL ntụ ntụ – 20mcg
1. Gwakọta ihe niile dị na igwekota Turbula, ma pịa mbadamba nkume na mkpakọ nke 20kN.
2. Gbakọọ n'ime mbadamba 100mg, na-eji akara 8mm.
7. Ahịa Clenbuterol HCL ntụ ntụ:
Nkem. Otu esi azụta Raw Clenbuterol HCL ntụ ntụ (CAS 21898-19-1); zụta CLEN HCL ntụ ntụ site na AASraw?
8 reviews maka Clenbuterol (CLEN) HCL ntụ ntụ
viagra dị mma ọbụlagodi enweghị ndenye ọgwụ dọkịta
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji viagra, ị nwere ike ịzụta viagra na ntanetị ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ
Paragraf a ga - enyere ndị ntanetị aka ị nweta ozi ndị ọzọ gbasara Clenbuterol maka iwulite ọhụụ
webpage ma ọ bụ ọbụna blọọgụ site na mmalite ruo na njedebe.Ọ bara uru!
Daybọchị ọma, obi dị m ụtọ na achọpụtara m blog gị, ahụtara m gị site na njehie,
mgbe m na-eme nyocha banyere Salbutamol, N'agbanyeghị nke m
Anọ m ebe a ugbu a ga-amasị m ịsị ekele maka nnukwu post na a
gburugburu blog na-atọ ụtọ (ahụrụ m ha n'anya / isi mara),
Enweghị m oge iji gụọ ya na nkeji mana m nwere
akwụkwọ-akara ya, yabụ mgbe enwere oge, aga m alaghachi
iji gụkwuo, Biko zoo ọrụ kacha mma.
Nwanyị nwekwara ike iji viagra?
O mee o! you nwere ike ịgwa m otu m ga - esi zụta clenbuterol n'ịntanetị>
ibe weebụ a na-enye ọkwa dị mma na ihe ndị ọzọ,
ọ nwere saịtị ọzọ na-enye ụdị ihe ahụ n'ile?
Nyocha ụlọ nyocha: nyocha nke ịdị ọcha nke 98% !!!
Enweghị m ike ikwenye na m ga-ahụ Clenbuterol ntụ ntụ dị otú ahụ na China. Ebe ọ bụ na a na-anabata ọnụahịa ntụ ntụ Clenbuterol, na-eche maka njikọta na-esote.